Ngemuva kokuzola kwengqungquthela ye-G20
I-G20 Hangzhou Summit ibilokhu isiphetho esiphelele, umhlangano wengqungquthela we-G20 wabaholi bama-G20, G20 amalungu e-GDP kazwelonke acishe abe ngu-85% womhlaba ...
UhloboHangzhouIngqungquthela ibilokhu isiphetho esiphelele, umhlangano wengqungquthela we-G20 wabaholi bakaG20, G20 Amalungu eNational GDP yezwe elinganiselwa ku-85%. Umuntu angacabanga ngezinga lokuvikeleka akujwayelekile, ngakho-ke ngesikhathi sengqungquthela, iminyango efanele yokusebenzisa yiziphi izinyathelo zokuphepha?
Izindlela zokuphepha ezibalulekile zibonisweUkuqashelwa kobuso ukubhekwa ngesikhathi sengqungquthela. Ezindaweni ezibalulekile zomphakathi futhi ufake inombolo enkulu yekhamera yenethiwekhi enezincazelo ephezulu yokuqashelwa kobuso, ngokubamba idatha yobuso yabantu abanomfanekiso omkhulu wedatha ye-Blacklist, uma kunabantu abayizingozi abazovela ngokushesha ukuboshwa okuthunyelwe ngokushesha. Ukuze kufinyelelwe engqungqutheleni ephephile.
Ngaphezu kokufaka ezindaweni ezibalulekile zomphakathi i-HD Camera esitimeleni nasemabhasini, i-Major Gateway futhi yandisa inani lerekhoda ye-HD NVR, ikhamera ye-DVR, ngenkathi ingeze abantu abaningi abakhathazekile ngesikrini sokuqapha; Ezindaweni zomphakathi futhi kwaqhubekela phambili nokuhamba kwabasebenzi bezokuphepha kungahle kwenzeke ingozi.
Kulokhu kubonga okukhethekile kulabo basebenzi bezokuphepha ngesikhathi sengqungquthela ye-G20 ukuzinikela kokuthula, wenza umphakathi ovumelanayo futhi wenze ukuthuthukiswa kwezwe lethu.
PHAMBI Amasu okulwa nobushokobezi kanye ne-countermeasure
I-Global Electronic Eye akulona iphupho OLANDELAYO